Wacaal Daray ah: Camey, Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo ku gacan sayray Gaas iyo qodobadii shirka Kismaayo (dhegayso) – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Camey, Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo ku gacan sayray Gaas iyo qodobadii shirka Kismaayo (dhegayso)
Seteembar 8, 2018 8:50 g 0
Madaxweyne kuxigeenka Dowlada Puntland Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdullahi Cumar “Camey” ayaa wareysi uu mar dhaweyd siiyey Radio Daljir waxa uu kaga soo horjeestay go’aankii maanta ka soo baxay shirkii Kismayo ee xiriirka loogu jaray Dowlada Federaalka ee Soomaaliya.
Dhanka kale, Camey ayaa si diirran u soo dhaweeyey qoraalka uu isla caawa soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Md. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, asaga oo hoggaanka dawlad goboleedyada iyo kan dawladda dhexeba ugu yeeray in ay ka soo qaybgalaan shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho 17ka ilaa 18ka Sebteembar, 2018, loogana wada tashan doonaa dardargelinta hawlaha muhiimka ah ee horyaalla Golaha Amniga Qaranka.
Md. Camey waxaa kale oo uu nooga warramay qorshaha dib-u-xoreynta gobolka Sool ee dowladda Puntland. Waxa uu u warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo ku sugan studiyeheenna Daljir Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 486 Wararka 22978
Madaxweyne Farmaajo oo u yeeray madaxdii maamulada kalsoonida kala noqday (dhegayso)